Ismaamulka Garissa oo dadaal adag ugu Jira ka hortagga Caabuqa... | Universal Somali TV
Barasaabka Ismaamulkan Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya Mudane Cali Bunow Qorane ayaa ka hadlay warar kutiri kuteen ahaa oo la xiriira bukaano qaba caabuqa Corona in la dhigay isbitaalka Garissa, kaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay isla dhaxmarayeen shacabka Magaalada.
Mr Qorane ayaa sheegay in baaritaano laga qaaday dhowr qof oo ay ka mid aheyd gabar ka soo safartay dalalka carbeed balse laga waayay caabuqa Cudurkaan.
Isaga oo hadalkiisa sii watay ayaa dhanka kale wuxuu soo hadal qaaday talaabada uu madaxweynaha qaranka Uhuru Kenyatta kaga horyimid mamnuucida Jaadka oo todobaadka ka hor barasaabka diiday in loo iib keeno Garissa, waxaana mr Qorane uu tilmaamay in aysan jirin cid ka weyn amarka Kenyatta, balse dowlada Garissa ay ku dadaaleyso sidii loo xakameyn lahaa isdhaxyaaca goobaha lagu iibiyo qaadka si uusan u faafin Cudurkan.
Dhanka kale barasaabka dowlad deegaanka Mandera Mudane Cali Ibraahim Roba ayaa xaqiijiyay Isniintan in laba qof oo qaba caabuqa Corana laga helay Mandera kadib baaritaano ay sameeyeen howlwadeenada caafimaadka magaalada Mandera.
Kan-xigaBoqolaal ruux oo markale caabuqa Coro...
Kan-horeXaalada Caafimaad ee Ra&#039;isul Was...
53,493,633 unique visits